Waa Maxay Kolestarool (Cholesterol)?!
Author Topic: Waa Maxay Kolestarool (Cholesterol)?! (Read 51158 times)
« on: September 02, 2008, 09:50:43 AM »
# Jirkaagu uu sameeyo kolestarool fara badan
# Aad cunto cunno uu dufanka cayriin iyo kolestaroolku ay ku sarreeyaan
# Aad sonkorow qabto, heerka qanjirka dheecaan burburintaadu uu hooseeyo kaasoo loo yaqaanno hypothyroidism, ama cudurka killida
Ma jirtaa calaamado lagu garto kolestaroolka sarreeya?
Cudurkaan waxaa loo yaqaanaa "dilaaga aamusan" sababtane waxay tahay calaamado lagu garto ma lahan, waxaa dhici karto calaamadda ugu horreysa inay noqoto, wadna xanuun "Angina", wadna qabad "Heart Attack", Faalij "Stroke" ama xanuun murqaha lugta markaa socotid.
Cillada kolestaroolka kacsan wuxuu noqon karaa dhaxal, caruurta ama dhalinyarada wuu ku dhacaa noocaan.
Halis ma ugu jiraa xanuunka kolestaroolka?
Haddii hooyadaa, aabaahaa, walaalahaa ay kolestarool qabaan ama da'daadu ka sarreeyso 50 jir, ama sonkor nooca 2 aad qabto, ama cayilan tahay ama aadan dhaqdhaqaaq samaynin ama sigaar iyo khamri cabto ama astaamaha lagu garto kolestaroolka aad indhaha ku leedahay.
# (Dufanka Cufkiisu Sarreeyo) High Density Lipoproteins (HDL):
Kolestaroolkaan "wanaagsan"? wuxuu kolestaroolka dheeraadka ah ka qaadaa dhiiggaaga wuxuuna ku celiyaa beerka si markaas jirkaagu uu u awoodo inuu uga takhaluso.
# (Dufanka Cufkiisu Hooseeyo) Low Density Lipoproteins (LDL):
Kolestaroolkaan "xun"? ee dhiiggaaga ku jira wuxuu ku kordhaa marinnada dhiiggaaga. Tani waxay keeni kartaa in marinnada dhiiggaagu ay ciriiri galaan, iyadoo dhibaato gelinaysa socodka dhiigga.
# Triglycerides: Cunidda Kaarbohaydareyt fara badan waxay kordhin kartaa heerka triglyceride.
# Heerka caafimaadka oo ka hooseeya 200.
# Haddii kolestaroolkaaga guud uu ka sarreeyo 200, takhtarkaagu wuxuu kaa baari doonaa HDL, LDL iyo triglycerides.
Kani waa kolestaroolka "wanaagsan"?: mar kasta oo ay tiradiisu sarreyso, way ka sii wanaagsan tahay.
# Heerka caafimaadka leh waa 60 iyo ka kor.
# Takhtarkaaga kala hadal daaweynta haddii heerkaagu ka hooseeyo 40.
Kani waa kolestaroolka "xun"?: mar kasta oo ay tiradiisu hooseyso, way ka sii wanaagsan tahay.
# Heerka caafimaadka leh wuxuu ka hooseeyaa 100.
# Waxaa laga yaabaa in takhtarkaagu uu doonayo in LDL-kaagu uu ka hooseeyo 70 haddii aad in dhawaale dhibaato wadne la kulantay.
# Takhtarkaaga kala hadal daaweynta haddii heerkaagu uu yahay 130 iyo ka kor.
# Heerka caafimaadka leh wuxuu ka yar yahay 150.
# Takhtarkaaga kala hadal daaweynta haddii heerkaagu uu yahay 200 iyo ka kor.
# Takhtarkaaga u tag oo kolestaroolka si joogto ah ha lagaaga cabbiro.
# Kala hadal takhtarkaaga, kalkaalisada ama cunto qoraha wax ku saabsan qorshaha cunto cunidda iyo jir dhiska.
# Daawo ayaa laga yaabaa in loo baahdo haddii cuntada la qoray iyo jir dhisku aysan ku filneyn xalka arrinta.
# Cun cunto buunshuhu ama faybarku aad ugu badan yahay, sida miraha isu dhan, digirta isu dhan, iyo furuto markaas la gooyey iyo khudrad.
# Xaddid cuntada ay ku jiraan xaddiyo sare oo kolestarool ah iyo dufannada cayriin iyo dufannada polyunsaturated-ka ah, sida hilibka lo'da, farmaajada, iyo caanaha.
# Cun cuntooyin dufankoodu hooseeyo, sida digaagga haragga laga diiray, kalluun ama caano dufanka laga saaray.
# Dooro cuntooyinka ay ku sarreeyaan dufanka monosaturated-ka ah, sida saytuunka ama saliidda canola iyo naatiska.
# Dub, kari, sol ama dhagax ku dub halkii aad shiili lahayd.
Takhtarkaaga kala hadal sidaad u maamuli lahayd heerarka kolestaroolkaaga.
Haddii aad qabto su'aal ama walac ku aadan qoraalkan halkaan ka weydii
Views: 49436 May 22, 2009, 01:41:01 PM
Views: 49901 February 05, 2008, 07:56:57 AM
Views: 45839 September 01, 2009, 02:23:15 PM
Views: 31022 May 06, 2018, 01:17:25 PM
Views: 30271 January 22, 2019, 08:47:10 PM